သင်ဒီမှာပါ: Home / ကိုယ္ေရးအခ်က္ လံုျခံဳမွု ေပၚလစီ
အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း ( "အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း") အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလည်ပတ်နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များလည်ပတ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များလည်ပတ်နေချိန်တွင်ကျနော်တို့စုဆောင်းစေခြင်းငှါမဆိုသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ privacy ကိုလေးစားရန် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း၏မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးက်ဘ်ဆိုက်အော်ပရေတာလိုပဲ, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကို web browser များနှင့်ဆာဗာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော browser ကိုအမျိုးအစား, ဘာသာစကား preference ကို, ရည်ညွှန်းပြီး site ကိုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီဧည့်တောင်းဆိုမှုကို၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါစေသောမျိုး Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း။ Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းအတွက် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပိုကောင်းအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဧည့်သည်များကသူ့ရဲ့ website မှာအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခြိနျမှနျမှက The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ဝေအသုံးပြုပုံဥပမာ, အအစုလိုက် Non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလည်းအသုံးပြုသူများကို logged in ဝင်သောအဘို့နှင့် The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းဘလော့ဂ်များ / ဆိုဒ်များတွင်မှတ်ချက်များထွက်ခွာအသုံးပြုသူများအတွက် Internet Protocol (IP) လိပ်စာများတူသောအလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုသာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးသူက IP လိပ်စာများနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများမြင်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘလော့ဂ် / site ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှထုတ်ဖော် မှလွဲ. ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တွေ့ရမှာပါသောတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်သုံးစွဲသူနဲ့မှတ်ချက်ပေး IP လိပ်စာများ logged in ဝင်သောတွေ့ရမှာပါ ဘယ်မှာမှတ်ချက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှအချို့ဧည့်သည်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလိုအပ်ကြောင်းနည်းလမ်းများအတွက် Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းတို့ကိုစုဝေးစေသတင်းအချက်အလက်များ၏ပမာဏနှင့်အမျိုးအစားအပြန်အလှန်၏သဘောသဘာဝပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာ, ကြှနျုပျတို့မှာ sign up ကိုအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များမေးပါ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း တစ်ဦး username နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများကို။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံသူများသည်သူတို့အားအရောင်းအ process ရန်လိုအပ်သည်အဖြစ်လိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့တောင်းနေကြသည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့်အတူဧည့်သည်ရဲ့အပြန်အလှန်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်သင့်လျော်သည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအမှု၌, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသာ insofar ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်း။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မထားဘူး။ နှင့်ဧည့်သည်များအစဉ်အမြဲပြုလုပ်အချို့ website ကို-related လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်မှသူတို့ကိုတားဆီးစေခြင်းငှါ၎င်းအသိပေးချက်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ဖို့ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဧည့်သည်များ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. စာရင်းဇယားစုဆောင်းလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလူသိရှင်ကြားဤအချက်အလက်ဖော်ပြရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများကပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်မထားဘူး။
အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း (ဈ) အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ကိုယ်စား၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါကြောင်းသာယင်း၏န်ထမ်း, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သူတို့အားအလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်တွေ့ရမှာပါ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာ, နှင့် (ii) အခြားသူများကထုတ်ဖော်ရန်မဟုတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပြီ။ သူတို့အားန်ထမ်း, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏အချို့သင့်အိမ်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာတည်ရှိစေခြင်းငှါ, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. , သငျသညျထိုသူတို့အားထိုကဲ့သို့သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းရန်သဘောတူသည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမည်သူမဆိုဖို့အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ငှားရမ်းသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယင်း၏န်ထမ်း, ကန်ထရိုက်တာများနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများဖို့ထက်အခြားအထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုသာဆင့်ခေါ်စာ, တရားရုံးအမိန့်များသို့မဟုတ်အခြားအစိုးရမဟုတ်သောတောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်တွေ့ရမှာပါ, ဒါမှမဟုတ်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းယုံကြည်နေသည့်အခါ ထုတ်ဖော်ကြီးမားသောမှာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်း၏အခွင့်အရေး, တတိယပါတီများမှသို့မဟုတ်အများပြည်သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောကြောင်းကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌။ သငျသညျတခုအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက်ဘ်ဆိုက်၏မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူဖြစ်ကြပြီးသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပေးထားကြပါပြီ, အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရံဖန်ရံခါသစ် features တွေအကြောင်းကိုသင်ပြောပြသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အဘယ်အရာနှင့်အတူယနေ့အထိသင်တက်ထားရန်အီးမေးလ်ပေးပို့စေခြင်းငှါ အကယ်. အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူသွား။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတောင်းဆိုမှု (ဥပမာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများတဦးမှတဆင့်) ကိုပေးပို့လျှင်, ငါတို့သည်ရှင်းလင်းသို့မဟုတ်သင့်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားအသုံးပြုသူများကိုထောကျပံ့ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ထုတ်ဝေခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းသတင်းအချက်အလက်အလားအလာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ-ဖော်ထုတ်များ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်, အသုံးပြုခြင်း, အပြောင်းအလဲတချို့သို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောအားလုံးအစီအမံကြာပါသည်။
တစ်ဦးက cookie ကိုတစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ website တစ်ခုစတိုးဆိုင်များကြောင်းအချက်အလက်များ၏ string ကိုဖြစ်ပြီး, ဧည့်သည်ရဲ့ browser ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ရန်ဧည့်သည်ကို return တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း။ အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းဧည့်သည်များက The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းက်ဘ်ဆိုက်၏သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှု, သူတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ဦးစားပေးဖော်ထုတ်ခြေရာခံကိုကူညီ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် cookies များကိုရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးသူ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းဧည့်သည်အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ features တွေအကူအညီမပါဘဲကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ၎င်းအားနည်းချက်နှင့်အတူအဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. မတိုင်မီ cookies တွေကိုငြင်းဆန်ဖို့သူတို့ရဲ့ browser များသတ်မှတ်ထားသင့်တယ် cookies တွေကို၏။
အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းဆိုပါက, ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာအားလုံး၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုက The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းလုပ်ငန်းထွက်ဝင်သို့မဟုတ်ဒေဝါလီဝင်, အသုံးပြုသူသတင်းအချက်အလက်တတိယအားဖြင့်လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဝယ်ယူဒါမှမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်အတွက်ခဲ့ကြသည် ပါတီ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဝန်ခံ, နှင့် The Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းမဆိုရယူဤမူဝါဒအတွက်ထွက် set အဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါစသော။